प्रधानमन्त्रीले भने– अबको मेरो कदम यस्तो छ « Ok Janata Newsportal
प्रधानमन्त्रीले भने– अबको मेरो कदम यस्तो छ
काठमाडौं । पछिल्लो समय फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गराएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न‘’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई आविश्वास प्रस्ताव ल्याएर देखाउन चुनौती समेत दिए ।
यदि अविश्वास प्रस्ताव ल्याए असफल पार्ने सामथ्र्य आफुसँग रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
उनले अविश्वास प्रस्ताव आए आफुलाई नेपाली काँग्रेस र जसपाले साथ दिनेमा विश्वस्त रहेको दावी गरे ।
अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने अंक गणित छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपाली काँग्रेस, वा मधेसवादी दलले राजनीति गरेको कुनै अमुक र पद नपाएर छट्पटाएका व्यक्तिका लागि पार्टी खोलेको वा राजनीति गरेको हो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलसँग ३१ सालदेखिको सम्बन्ध र मित्रता रहेको भन्दै आफु प्रजातन्त्र बचाउन लागि परेको बताए ।
राजीनामा गोजीमै राख्नुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नलेख्ने र लेख्न नपर्ने दावी समेत गरे ।
‘राजीनामा लेख्दिनँ । राजीनामा लेख्नुपर्ने अवस्था होइन, छैन । मैले अरु पनि बाटा समाउन सक्छु । त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर मलाई हटाउने बाटो पनि छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
उनले संसदीय दलमा पनि आफनै बहुमत रहेको भन्दै पोहोर गरेका हस्ताक्षर प्रचण्ड माधव पक्षले अहिले आफुविरुद्ध बिक्री गरेको आरोप लगाए ।
‘बहुमत छ भनेर छाति पिट्नु बेग्लै हो । पोहोर गरेका हस्ताक्षर अहिले बिक्री गर्नु बेग्लै कुरा हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपनि अदालतले राजीनामा देउ नभनेको दावी गरे ।
‘मैले राजीनामा गर्ने हो भने अदालतको फैसलाले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ’ ओलीको भनाई छ ।
प्रचण्ड संसदीय दलको नेता माइतीघर मण्डलाबाट छानिएको भन्दै ‘बहुमत उहाँसँग छ भने पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री फेरे भैगो नि’भनेर उनले चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीले आफु उत्तेजनामा गएर कुनै निर्णय नगर्ने पनि बताए ।
‘मैले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन । उपयुक्त विकल्प भेटियो भने स्थिरतातर्फको प्रयास खासै नखज्मजिने र नबिग्रने देखियो भने राजीनामा गर्न सकिन्छ । विश्वासको मत लिन सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन सकिन्छ ।
यो त प्रकृया छ’ ओलीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आफुलाई ग्लानी नभएको भन्दै अस्थिरता मच्चाउन लागेकाले देश बचाउन उक्त कदम चाल्नुपरेको बताए ।